Gosiputa Taa na Uzo Ibu Nsogbu na Omume ndi ozo | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Chee echiche taa banyere ụzọ ị na-ebu ọnụ na omume ndị ọzọ nke nchegharị
“Ndị ọbịa agbamakwụkwọ ha ọ̀ pụrụ ibu ọnụ mgbe nwoke ahụ na-alụ nwanyị ọhụrụ so ha? Ọ bụrụhaala na ha na nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ anọnyere ha, ha enweghị ike ibu ọnụ. Ma ubọchi gābia, mb wille agānapu ha Onye nālu nwunye ọhu, mb theye ahu ka ha g willbu ọnu n'ubọchi ahu. Mak 2: 19-20
Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a dị n’elu na-ekpughe azịza Jisọs nye ndị na-eso ụzọ Jọn Onye Na-eme Baptizim na ụfọdụ ndị Farisii jụrụ ya ajụjụ banyere ibu ọnụ. Ha kwuru na ndị na-eso ụzọ Jọn na ndị Farisii na-agbaso iwu ndị Juu na-ebu ọnụ, ma ndị na-eso ụzọ Jizọs anaghị eme otú ahụ. Ibọrọ Jesus enen̄ede ebehe obufa ibet oro aban̄ade utreudia.
Ibu ọnụ bụ omume ime mmụọ magburu onwe ya. O n’enye aka iwusi ike imegide onwunwa nke anu aru ma nye aka iweta nkpuru obi. Mana ekwesiri imesi ya ike na obubu obughi ebighi ebi. Otu ubochi, mgbe anyi g’enweta ihu Chineke n’eluigwe, odighi kwa mkpa obubu onu ma obu ime uzo obula. Mana mgbe anyị nọ n’ụwa, anyị ga-alụ ọgụ, daa ma tufuo ụzọ anyị, otu n’ime omume ime mmụọ kachasị mma iji nyere anyị aka ịlaghachikwute Kraist bụ ikpe ekpere na ibu ọnụ ọnụ.
Ibu ọnụ ghọrọ ihe dị mkpa "mgbe anapụrụ nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ". N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ibu ọnụ dị mkpa mgbe anyị mere mmehie, ịdị n’otu anyị na Kraịst wee malite ịjụ oyi. Ọ bụ mgbe ahụ ka ịchụrụ onwe anyị ọnụ nke ibu ọnụ na-enyere aka imeghe obi anyị nye Onyenwe anyị ọzọ. Nke a bụ eziokwu mgbe ụdị omume mmehie bidoro ma gbanye mkpọrọgwụ. Ibu ọnụ na-etinye ike dị ukwuu n’ekpere anyị ma na-esetịkwa mkpụrụ obi anyị ka anyị wee nata “mmanya ọhụrụ” nke amara Chineke n’ebe anyị chọrọ ya.
Chee echiche taa banyere ụzọ ị na-ebu ọnụ na omume ndị ọzọ nke nchegharị. Are na-ngwa ngwa? You na-achụ ọtụtụ ihe iji mee ka uche gị sie ike ma nyere gị aka ịmatakwu Kraịst? Ma ọ bụ na nke a ike ime mmụọ omume eleghara anya n'ụzọ ụfọdụ na ndụ gị? Mee ka ntinye aka gị dị ọhụrụ ugbu a ma Chineke ga-arụsi ọrụ ike na ndụ gị.
Onyenweanyị, a na m emeghe obi m mmanya ọhụrụ amara nke ịchọrọ ịwụkwasị m. Nyere m aka idozi amara a nke ọma na iji ụzọ ọ bụla dị mkpa iji mepee onwe m karịa Gị. Nyere m aka, ọkachasị, ka m soro na ọmarịcha mmụọ nke ibu ọnụ. Mee ka irutu ihe a na ndu m nye nkpuru oma maka alaeze Gi. Jesus ekwere m na gị.